बहु-उपयोगी Snaptu [Friday Tech]
Aakar July 30, 2010
हामी इन्टरनेट को युग मा छौँ । इन्टरनेट त छँदै नै छ, साथ मा संसार मोबाइलमय नै भएको छ । हाम्रै देश को तथ्याङक ले पनि भन्छ, हाम्रो देश मा इन्टरनेट चलाउने ८० प्रतिशत भन्दा बढि मान्छेहरु, मोबाइल बाट नै इन्टरनेट चलाउँछन् । हिजो आज, च्याट गर्न र वेव सर्फ गर्न, फेसबुक चलाउन वा ट्विटर चलाउन पहिले को जस्तो साइबर धाएर कमै जान्छन् । हिजो आज अधिकांश त मोबाइल बाटै नेट चलाउँछन् । एनटिसी, एनसेल आदि को जिपिआरएस, थ्रीजी, एज नामक सेवा मार्फत हाम्रो मोबाइल इन्टरनेटमय बन्दै गएको छ ।
स्मार्टफोन, आइफोन बाहेक का अन्य मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु, प्राय: ओपेरा मिनी तथा मोबाइल को आफ्नै ब्राउजर बाट इन्टरनेट को कुना चिहाइरहेका हुन्छन् । अरु केही नहेरेपनि, फेसबुक त जरुर हेर्छन् । तर के तपाई ले Snaptu एप्लिकेशन मार्फत इन्टरनेट चलाउनु भएको छ त ? आउनुहोस्, आज हामी यही Snaptu को बारेमा कुरा गर्दै छौँ । यो इन्टरनेटमय मोबाइल मा यो Snaptu तपाई को लागि बहुउपयोगी सावित हुन सक्छ ।
Snaptu के हो ?
Snaptu एउटा मोबाइल एप्लिकेशन हो जसको इन्टरफेस ले स्मार्टफोन तथा आइफोन को झझल्को दिलाउँछ । स्नापटु यस्तो मोबाइल एप्लिकेशन हो, जसको माध्यमबाट एकै ठाउँबाट फेसबुक, ट्विटर आदि साइटहरु चलाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, Snaptu मा पिकासा, फ्लिकर, बिग पिक्चर्स, मौसम, खेल, सिनेमा, समाचार आदि सम्पुर्ण कुराहरु समावेश गरिएको छ ।
मोबाइल मार्फत ट्विटर तथा फेसबुक चलाउन को लागि, यो निकै उपयोगी सावित भएको छ । तपाई सजिलै सँग आफ्ना स्टाटसहरु अपडेट गर्नसक्नुहुन्छ । एउटा मात्रै बैगुन भनेको चाँहि यही हो कि, Snaptu मा युनिकोड सपोर्ट त्यति राम्रो छैन । अन्यथा यो भन्दा अरु उत्कृष्ट एप्लिकेशन मैले अहिले सम्म भेटेको छैन ।
फेसबुक र ट्विटर को लागि मात्र होइन, तपाई खेलप्रेमी हुनुहुन्छ बारम्बार क्रिकेट र फुटबल को लाइभ स्कोर हेरिरहनुहुन्छ । या तपाई बारम्बार समाचार हेर्नुहुन्छ या तपाई आफ्नो ठाउँ को मौसम को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ । तपाईलाई टेक्नोलोजी खबर जान्ने इच्छा छ भने पनि Snaptu तपाईको लागि सर्वोत्कृष्ट एप्लिकेशन हुनसक्छ । मासवेल, टेकक्रन्च, गिजमोडो, लाइफ ह्याकर देखि लिएर बिबिसी र गार्जियन सम्म करिब १ दर्जन साइट का टेक्नोलोजी र सोसल नेटवर्क का खबरहरु तत्काल विना झन्झट तपाइ, Snaptu मा एकै ठाउँमा पढ्न सक्नुहुन्छ । यति मात्र होइन, तपाईलाई ती ‘लेख’हरु फेसबुक र ट्विटर मा सेयर गर्न लाग्यो भने पनि, Snaptu मार्फत एक क्लिक मा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।
हेर्दा आइफोन हो कि जस्तो भान पर्ने Snaptu प्राय: ट्विटर चलाउनेहरु का माझ लोकप्रिय भएपनि, अधिकांश सर्भिसहरु एउटै एप मा पाइने भएको कारण, हिजोआज धेरै जना Snaptu को प्रयोग तर्फ आकर्षित भइरहेकाछन् । साथै, अन्य को दाँजो मा स्नापटु मा खर्च पनि केही कम नै लाग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ ।
ट्विटर चलाउन होस या फेसबुक चलाउन Snaptu निकै उपयोगी देखिएको छ । तपाई फेसबुक को लाइक देखि लिएर वालपोष्ट र एप्लिकेशन पोस्ट सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन मोबाइल साइट मा सम्भव छैन । ट्विट मा आउने लिंक होस, या ट्विटर मा गर्नुपर्ने Reply, Retweet वा Message होस्, Snaptu ले एकदम सरल बनाइदिएको मेरो आफ्नो अनुभव छ ।
प्राय: Java एप्लिकेशन चल्ने सबै मोबाइलहरु मा Snaptu चलाउन सकिन्छ, जुन getjar, snaptu को साइटबाट निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । साँच्चै मेरो लागि त यो Snaptu बिदा को झन् साथि भएको छ । बारम्बार टेक्नोलोजी, सोसल नेटवर्क ब्लगहरु हेर्नु, ट्विट गर्नु, फेसबुक मा सेयर गर्नु, आफ्नो ठाउँ को मौसम बारे जानकारी राख्नु, दैनिकी नै बनेको छ । यही एउटा गुनासो चाँहि छ कि, युनिकोडहरु चाँहि Snaptu मा प्रस्ट हुँदैनन् । सायद तपाईहरु अलमल मा पर्नु भो होला, आफैँले अनुभव गर्न को लागि त Spantu डाउनलोड गर्नैपर्ने हुन्छ ।
Download : Snaptu | Snaptu (via getjar)
YS OLEE October 11, 2010 at 4:00 PM
Yes Snaptu is great I am using it since6months. I also feel sad not support unicode. otherwise all thing in 1 place.
YS OLEE November 12, 2010 at 4:03 AM